Zvinyorwa paHupenyu hwaClive Davis Kuuya kuApple Music muna Gumiguru 3 | IPhone nhau
Nguva pfupi yapfuura kuvhurwa kweApple yekushambadzira mimhanzi sevhisi, vakomana veCupertino vakatanga kuenda kumberi vachizivisa kuti Apple Music yaisazove ingori yekutamba mimhanzi sevhisi, asi zvakare yaizotipawo zvinyorwa zvine chekuita nemumhanzi. Nekufamba kwenguva takaona kuti Apple Music inorarama sei kwete chete kubva kumimhanzi, sezvo yekutanga nhevedzano yeiyo inoyerera sevhisi yemumhanzi yaive nechokuita nekugadzirwa kwezvishandiso nePlanet yeApplication. Nguva pfupi yapfuura, Carpool Karaoke yakawedzerwa, iyo dingindira raive nechekuita nemimhanzi, kunyangwe vasiri vese vaenzi vanoonekwa mune ino spin-off.
Mukuyedza kuyedza uye kudzoka kwayakatangira, Apple yakasimbisa zviri pamutemo zuva iro iyo zvinyorwa pamusoro pehupenyu hwaClive David kutanga kuratidzwa chete paApple Music: Gumiguru 3. Rondedzero yehupenyu hwaClive David, inonzi The Soundtrack of Our Lives, yakapihwa zviri pamutemo kuTribeta Film Festival uye mumazuva angangoita gumi nemashanu ichave ichiwanikwa kune vese vateveri veApple yekufambisa mimhanzi sevhisi. Apple yasimbisa zuva rekutanga neshoko rinotevera.
Kupfuura kungoita bhaisikopo, Ruzha rweRupenyu Rwedu rwendo rwakatungamirwa rwekuchinja kwetsika kubva kuma60 kusvika pakukwira kwehip hop, inotungamirwa nemurume aigara achibata masaisai anotevera pamberi pevamwe vese, dai asiri iye. ndiani akazvisika. Janis Joplin, Bruce Springsteen, Simon & Garfunkel, Santana, Miles Davis, Billy Joel, Barry Manilow, Patti Smith, The Grateful Dead, Kenny G, Aretha Franklin, Whitney Houston, Sean Combs, Alicia Keys - Kunyange runyorwa rusina kukwana ita kururamisira kune yakasarudzika renji yeaartist Davis akawanikwa, kurairwa kana kutarisirwa panguva yebasa rake.
Ini ndinofunga kuti nemazwi aya zviri pachena anga ari Clive Davis weindasitiri yemimhanzi mumakore makumi mashanu apfuura. Ichi chinyorwa chakavakirwa pane nhoroondo yeupenyu yakanyorwa naClive Davis pachake, uyo akataura kuti anofara kuti Apple yakawana kodzero yekuitepfenyura kuburikidza neApple Music. Clive anoti Apple yakashandura indasitiri yemimhanzi mumakore achangopfuura uye kuti irukudzo kukwanisa kugovera mimhanzi yakasarudzika uye nyaya dzave chikamu chebasa rake nemamirioni ese evanyoreri veApple Music.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Zvinyorwa pahupenyu hwaClive Davis zvinorova Apple Music muna Gumiguru